Ibsaan Magaalaa Maqalee Guyyoota Shaniif Adda Cituun Rakkoo Keessa Nu Buuse Jedhu Jiraattonni
Ebla 05, 2021
Faayilii - Magaala Maqalee
Naannoo Tigraay keessaa tajaajilli ibsaa kamisa darbe addaan cite hanga har’aatti bakkatti kan hin deebine ta’uun ibsamee jira. Magaalaa Maqalee keessaa mana daabboo kan qaban obbo Abrahaa suma akka dubbatanitti guyyoota shanan darbe ibsaan waan adda citeef hojii isaaniitti gufuu ta’uu dubbatu. Ibsaan amma amma adda cituu dhaan suphuun battala utuu hin suphamin turuun mootummaan ta’e jedhee uummaticha miidhuuf kan raawwate jedhanii kan amanan ta’uu dubbatan.
Rakkoo jiru battala furuu dhiisuu dhaan uummaticha dinagdee dhaan miidhuuf kan ta’e shira siyaasaa ti jedhan. jiraattonni magaalattii tajaajilli ibsaa waan hin jiraanneef bishaannis adda cite rakkoo keessa jirra jedhu. Mootummaanis uummataaf yaade uummatichaaf hatattamaan furmaata kennuu qaba jedhu.
Daayirikterri kominikeeshinii tajaajila humna ibsaa Itiyoopiyaa obbo Moges Mekonnin dhimma kanaa gaafatamanii tajaajilli ibsaa maaliif akka adda cite waajjirri isaanii quba hin qabu jedhan. Hojjttoonnis bobba’anii rakkoo isaa qorataa jiru jedhan.
Rakkoon jiru furamee tajaajilli ibsaa yoom akka itti fufu gaafatamanii, rakkoon jiru maal akka ta’e waan hin beekamin jiruuf yoom akka ta’e ibsuun rakkisaa dha jedhan. Ibsaan amma amma adda cituun shira siyaasaa ti jechuun kan jiraattonni himtan waan hiika qabu miti jedhan. Naannoo sanaa ibsaan kan inni baduuf daandiin ibsaa gurguddaan waan citeef jedhaniiru.
Qaamni kana raawwate eenyuunuu haa ta’u Waaltaa keenya kasaarseera jedhan. hojii uummatichaa kan hawaasummaa isaa fi dinagdee isaa danqeera jedhan. miidhaa dhaqqabe duuba garuu kanatu jira jedhanii dubbachuun rakkisaa dha jedhan jechuu dhaan Mulugeta Atsbeha Meqelee irraa gabaaseera.
Yaadawwan Ilaali (3)
Mariin Dhimma Hidha Laga Abbayyaa Kinshaasaa Keessatti Eegale
KFOn Ajjeechaa fi Miidhaaleen Itiyoophiyaa Bakka Adda Addaatti Raaw'ataman Akka Qaama Walaban Qorataman Gaafate
Qabiinsa Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaa fi Ertraa Irratti Maaltu Gabaafame?
‘Baqattoonni Hedduun Hargeessaa Qabamanii Gara Biyya Darbamaa jiru’ Bakka Bu’aa Hawaasaa
Ministaroonni Biyyoota G- 7 Loltoonni Ertiraa Hatattamaan Tigiraay Keessaa Akka Bahan Gaafatan
Ibsa Prezidaantiin Naannoo Tigraay Kennan
Tarkaanfiin Karaa Nagaa Amma Jiruu Isaa Dhumaa Akka Ta’e Abiyyi Ahimad Himan
Mootummoonni Naannoolee Amaaraa fi Tigraay Lolatti Akka Jiran Beeksisan
Mootummaan Naannoo Tigiraay Booji'amtoota Waraanaa 1000 Caalan Gad-lakkise Jedha
Haleellaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Dheessuun Ummanni Godaanaa Jira
‘Hojii Hojjetanirraa Fayyadamuu Dhabuu, Hiyyuma Biyyaa fi Copyright’n Artiistota Miidhaa Jira’ Ogeessa
Baqattonni Ertraa Tigraay Keessatti Rakkachuu Gam Lameen Balaaleeffataa Jiru
Tigraay Keessatti Gargaarsa Dhaqqabsiisuuf Karaan Banamuu Qaba: WFP
Gargaarsa Raabsuuf Qophii Dha: Mootummaa Itiyoophiyaa
Kanneen Barnootaaf Tigraay Keessatti Ramadaman Nuu Baasaa: Maatii
Sirnii Baniinsa Oloompikii Jaapaan Har’a Jalqabamee